Hogaanka Haweenka Soomaaliyeed ayaa ku Booriyay in la Dadejiyo Ansaxinta Sharciga Doorashada ee Horyaalla Baarlamaanka | UNSOM
Muqdisho - Hoggaamiyayaasha haweenka Soomaaliyeed ayaa maanta ugu baaqay xubnaha baarlamaanka federaalka in ay ansixiyaan dibuhabaynta xeerka doorashada ee qaybta haweenka oo ah 30% ee ku aadan xildhinaada qaranka mustaqbalka.
"Sharciga doorashooyinka oo siinaya haweenka matalaad 30% qoondada haweenka ayaan horey loo ansaxin, waan ku hanweynahay in labada gole ee kala ah Golaha Shacabka iyo Golaha Aqalka sare ay meelmarin doonaan, iyo in dastuurka qabyada ah wax ka baddel lagu sameeyo si uu u la jaanqaado" ayay tiri Caasha Cabdulle Siyaad, oo ah guddoomiyaha Somali Women’s Leadership Initiative ah na shirguddoonka kulanki lagu wadahadlayey.
Dulucda kulanka ayaa halkudhigeedu ahaa “Haweenka Soomaaliyeed oo u midoobay ka qaybgalka siyaasadda” oo ay isagu yimaadeen in ka badan 30 haween ah oo ka kala socday baarlamaanka federaalka, bulshada rayidka, Guddiga Madaxa Banaan ee Doorashooyinka Qaranka, bulshada qurbojoogta, xisbiyo siyaasadeed iyo aqoonyahano.
Caasha Siyaad ayaa tibaaxday in wadahadalku sii ambaqaadi doono horumarka ay ku tallaabsadeen haweenka Soomaaliyeed ilaa hadda iyo caqabadaha soo foodsaaraya maadaama ay isku diyaarinayaan doorashada qof iyo cod oo la qorsheeyey in ay dhaco 2020-ka.
Wadahadalkan waxa taageero ka geestay Xafiiska Hawlgalka Kaalmeynta Qaramada Midoobay ee Soomaaliya ( UNSOM) , iyada oo uu shirkan ka mid yahay kuwa isdabajoog ah oo ay soo qabanqaabiyeen hogaanka haweenka Soomaaliyeed oo dhordhacu ah dabbaaldegga maalinta haweenka caalamiga ah oo ku aadan Jimcaha ay bisha Maarso tahay 8-da.
Warmurtiyeed loo dhanyahay ayaa ka soo bixi doona shirwaynaha 3-da maalmood ah ee haweenka oo berri ka bilaabanaya Muqisho.
Xaliima Ismaaciil Ibraahim oo ah madaxa Guddiga Doorashooyinka Madaxa Banaan ee Qaranka ayaa u guuxday wadahadalkan iyada oo xustay in shirarka noocan ah ay qayb ka gaysanayaan xal u helidda dhibaatooyinka soo ifbaxa inta lagu gudajiro doorashooyinka.
“Shirkan waxa uu ku saabsanyahay xuquuqda haweenka Soomaaliyeed iyada oo uu shirku ku soo aaday xuska maalinta caalamiga ah ee haweenka,” ayay tidhi Xaliima Ismaaciil.
Waxa ay intaasi raacisay in Guddiga Doorashooyinka uu si dhaw u la shaqeyn doono bulshada rayidka si dadweynaha loogu wacyigeliyo dibuhabaynta doorashayooyinka imanka la wado ee ku aadan doorashooyinka ku soo fool leh dalka.
Kasoo qaybgalayaasha ku sugan shirka ayaa ka hadlay muwaadiic kala duwan oo taabanaya geeddisocodka dibu-eegista dastuurka, tallaabooyinka waxku-oolka ah ee doorashooyinka, nidaaminta xisbiyada iyo dhibaatooyinka ku horgudban haweenka ee ka qaybgalka dawrka haweenka siyaasadda.
Intii lagu guda jiray doorashooyinkii dhacay 2016-kii ayaa tirada boqolleyda haweenka ee galay baarlamaanka federaalka ka soo kacay 14% tagay na 24%.
Guddoomiyaha ururka aan dawliga ahayn ee u taagan haweenka, waxbarashada iyo ganacsiga, Asli Ismaaciil Ducaale ayaa niyadxumo ka muujisay sadbursi lagu hayo haweenka ee ku aadan geeddi-socodka meelaha wax lagu go’aamiyo, iyada oo ku baaqday tallaabo waxtar leh oo lagu awoodsiinayo haweenka.
“marka laga hadlayo ganacsiga iyo dhaqaalaha dalkan , haweenka ayaa ah cidda taageerta dalka. Haweenka ayaa soo galiya 60% dhaqaalaha dalka, halka raggu soo geliyaan 40%, layaabka ayaa ah in haweenka aan lagu arag meelaha dalka laga maamulo,” ayay tidhi Asli Ducaale.
 Casiisa Cali: Waxaan ka shaqeeyaa sidii loo soo celin lahaa dimoqraadiyadda loona xoojin lahaa awoodda haweenka ku nool Soomaaliya
 Xoghayaha Guud – Fariin Ku Aaddan Maalinta Caalamiga ah ee Haweenka 2019